Hong Kong: Bahàno Ny Afovoany – Mialoha Ny Fanesorana An-kery · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2012 0:22 GMT
Nitatra hatrany Hong Kong ny hetsi-panoherana tamin'ny taona lasa “Bodoy i Wall Street” ary hatramin'ny 15 Oktobra 2011, ireo mafàna fo any an-toerana dia nilasy teo amin'ny làlana mamakivaky ny kianja eo ambanin'ny tranoben'ny banky HSBC ao amin'ny distrika Afovoany.
Ny ‘Bahàno Ny Afovoany‘ dia naharitra maherin'ny folo volana ary isan'ny iray lava indrindra tamin'ireo hetsika fibodoana manerantany. Vao haingana ny HSBC no nahazo taratasy tamin'ny fitsarana hanesorana ireo mpibodo – mafàna fo, mpilanja sakaosy mandehandeha sy tsy manan-kialofana ka ny 27 Aogositra amin'ny 9 ora alina no fetra farany.
Ny 26 Aogositra, mafàna fo vitsivitsy no nikarakara fihaonana hanaovana jery todika ny hetsika fibodoana nataon-dry zareo, Damon Wong avy amin'ny inmediahk.net nitatitra [zh] avy eny an-toerana hoe :
Tam Chun-Kei, mpikambana iray avy amin'ny Left21, nandray anjara tamin'ny dingana voalohan'ny hetsika Bodoy ny Afovoany dia nahatsapa fa nisy fahasamihafàna teo amin'ny hetsika sy izay nandrasany. Io dia novolavolaina tanaty vondrom-piarahamonina mamelon-tena saingy ny fifandraisana eo amin'ny hetsika mamelon-tena sy ny hetsika manohitra ny kapitalista dia tsy tafita tany amin'ny sarambabem-bahoaka. Chow Sze-chung izay navitrika tokoa tamin'ny Hetsika “Bodoy i Queen's Pier” teo anelanelan'ny 2006-2007 dia nanamarika ny zava-misy hoe nibahana ny ain-dehiben'ny fandraharahana ara-bola tao Hong Kong ireo mafàna fo, ny foiben-toeran'ny HSBC dia faran'izay mari-pamantarana ary ny fahatongavan'ilay hetsika fanesorana dia mety vao mainka hampivoitra ilay fifandroritana. HoLok, mpikambana iray ao amin'ny Ligin'ny Fitsaran-Tany, dia nino fa ilay hetsika fibodoana dia mety hihanaka any amin'ny faritra hafa any Hong Kong, tahaka ny avaratra-atsinanan'ireo Faritra Vaovao manohitra ny fomba fihetsik'ireo mpampiasa vola amin'ny findramam-bola hividianana tany [Fanamarihana: fomba fanao ividianana tany tsy voajary amin'ny fikendrena ny hitazona azy mandra-piakatry ny sandany rehefa amidy amin'ny hafa indray]
Pak Chai, mpaka sary iray amin'ny hetsika sosialy, dia nandrakitra ireo toerana azo iainana[zh] teo amin'ny toerana nanaovana fibodoana tamin'ny alàlan'ny fanasàna ireo mpandray anjara mba hiara-hàka sary sy hanoratra izay teny famaritana ny sarin'izy ireo tsirairay avy. Sary nampiasaina nahazoana alàlana :
Ooops, manahirana ity… nanomboka nifampikasokasoka izahay rehetra nandritra ilay fanentanana Bodoy ny Afovoany
Matory amin'ny tany ny iray, ny iray matory ao an-dasy, ny iray matory ambony seza. Raha tsy nisy ny Bodoy ny Afovoany, dia nijanona ho toy ny taloha ihany ny fahazàran-dry zareo , saingy mety tsy ho nifankahalala akory izy ireo.
一張橫額，可以用來劃清界線，卻也可以用來連結彼此﹣﹣我們曾經為「反對資本主義」的 橫額用甚麼布來寫而爭論：花布？黑底白字？我們各有美學，確有差異。但，有乜緊要得過 嘗試與共存？
Fampiasa mba hanoratana na hifandraisana ny sorabaventy — vantany vao miady hevitra momba ny karazana lamba hanoratantsika ny teny faneva hoe “manohitra ny kapitalisma: lamba misy sarisarim-boninkazo? lamba mainty misy sary amin'ny fotsy? Dia efa manana ny fitsaràntsika ara-taokanto isika izay . Ny zava-dehibe indrindra dia ny fiezahana hiaina miaraka ao anatin'ny fahasamihafantsika rehetra.
Mpanome lanja manokana ny vehivavy?
Tany amboalohany isika dia naniry hahita toerana iray hialàna sasatra rehefa fotoana fisakafoana antoandro ary aorian'ny asa. Avy eo isika nandray ho fahazàrana ny mivenjivenjy eny rehetra eny isanandro.
Ampiasao ny Internationale (hira fanevan'ny mpiasa) ho fampitoniana ny fifandirana. Indray alina, dadatoa anankiroa no nifanasa vangy momba ny hoe misy sa tsy misy tokoa ny olona matin-kanoanana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fantatsika fa tia mihira ny iray tamin'izy ireo, dia nanomboka nihira ny Internationale avy eo, ary dia nijanona tsy niady intsony.
Antitra sy tanora avy amin'ny Anjerimanontolo mpanao hetsi-panoherana
Mbola manana safidy isika ao anatinà tontolo iray ifampihinanan'ny olona sy amonoany biby.
Fifampizaràna hatezerana amin'ny molotra sy volo
Manan-javatra niaraha-niainantsika isika – roa tamintsika no nandeha nitsidika azy io tany amin'ny toeram-pitsaboana. Nandainga tamin'ilay mpitsabo mpanampy izahay mba hitondràna azy mivoaka hifoka sigara.
Tonga nifamory teto izahay tamin'ny 16 Oktobra ary tsy niala nanomboka teo.
Toeram-pilasiana iray no ifampizarànay. Rehefa miverina izy dia mahita toerana iray hafa hatoriana aho. Rehefa matory ikala, dia ranamana kosa matory ery ambony sezalava. Tsy ahoanay izay fijerin'ny hafa anay, toeram-pilasiana iray ihany no ifampizarànay.
Nanomboka taminà famantaranora ny fifankatiavan'ireto lehilahy roa ireto.
Mahazatra anay ny mandao ny Afovoany rehefa amin'ny 3 na 5 ora maraina miaraka amin'ireto fanontaniana manaraka ireto eny an-dàlana isaky ny famindra iray ataonay, mankany amin'ny fiara sy miverina mody an-trano.
Jono mamokatra. Indray alina dia nitantara tamiko ny zava-niainany ny jono nanerana izao tontolo izao izy. Izany no antony tsy maintsy hiarahanay mandeha manjono.